Xarun cusub oo ka shaqeyn doonta xuquuqda dadyowga asaliga ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadka Sámiga ah oo ka mid ah dadyowga laga tirada badan yahay ee dalkan Iswiidhan. sawir: Junge, Heiko
Xarun cusub oo ka shaqeyn doonta xuquuqda dadyowga asaliga ah
Xarun difaacda xuquuqda dadka asaliga ah oo Stockholm laga furayo.
La daabacay tisdag 3 oktober 2017 kl 10.34
Stockholm ayaa waxay xarun u noqon doontaa hey’ad cusub oo caalami ah taas oo u hawlgali doonta dhowridda xuquuqda dhulka iyo keymaha ay iska leeyihiin dadyowga asaliga ahi (ursprungs- och lokalbefolkning).
Xafiiskan oo heer caalami ah ayaa ah kan kaliya, isla markaana ah kii ugu horeeyey ee ka shaqeeya dhowridda xuquuqda lahaansho ee dadka asaliga ah oo badankoodu ku kala nool dalal badan faqri ahi, ay u leeyihiin dhulka iyo keymaha ay ku dhex nool yihiin.
Hey’adda mucaawanada caalamiga ah ee Sweden (Sida) ayaa ka mid ah kuwii iska laha fikirka xaruntaan lagu aasaasey, waxay hey’adda Sida ururkaas cusub ugu deeqi doontaa lacag mug leh.
Carin Jämtin waa maareeyaha guud ee hey’adda mucaawanada caalamiga ah ee Sweden (Sida), waxayna tiri iyadoo arrinkaan ka hadleysa:
-Waa urur muhiim ah oo ka shaqeyn doona tuulooyin kala duwan oo ay ku nool yihiin dadyowga asaliga ahi, kuwaas oo ku kala firidhsan dalalka faqriga ah ee dunida oo dhan. Ururkaani wuxuu difaaci doona xuquuqda dadkaasi ay lahaansho ahaan u leeyihiin dhulka iyo keymaha ay ku dhexnool yihiin, ayey tiri Carin Jämtin waa maareeyaha guud ee hey’adda mucaawanada caalamiga ah ee Sweden (Sida).
Ururkaan ayaa waxaa aasaasiddisa iska kaashanaya Hey’adda Sida, Hey’adda Norad oo ah hey’adda mucaawanada caalamiga ah u qaabilsan dalka Norwey iyo hey’adda Ford Foundation oo laga leeyahay dalka Mareykanka.
Hey’adda Sida ayaa sanooyinkii u dhexeeyey 2014-kii ilaa iyo 2017-kii waxay ku hawlaneyd mushaariic tujaaba ah oo ay muddadaas ka fulisey lix dal oo dunida ka mid ah ayna ka mid yihiin dalalka Mali iyo Peru.
Shaqada hey’adda Sida ay dalalkaas ka fulisey ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa quxuuqda ay dadyowga asaliga ahi lahaansho ahaan u leeyihiin dhulalka iyo keymaha ay ku dhexnool yihiin.